जुलाई २१, २०२१
के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ कि यो हाम्रो टीमको एक हिस्सा हुन कस्तो हुन्छ? यदि त्यसो हो भने, त्यसोभए तपाईं भाग्यमा हुनुहुन्छ। हामी तीन दिनसम्म उत्साहित टोली सदस्यहरूका साथ लाइफ किस्तमा अर्को दिन फर्केका छौं! तिनीहरूको प्रत्येक अनौंठो परिप्रेक्ष्यमा पर्दा पछाडि गहिरो हेराई प्रदान गर्दछ Graton मा एक दिन कस्तो छ। हामी पेय पदार्थ, भोजन र पुरस्कारको दुनियामा डुबुल्की हाल्नुहोस् र उनीहरूले के भन्नु पर्ने थियो हेर्नुहोस्।
लौरा - भोजन कक्ष उपस्थिति
लौरा मूल रूपमा मेक्सिकोको हो र छ वर्षको लागि हाम्रो टीमको सदस्य भैरहेको छ। उनी क्यासिनो विश्वका लागि कुनै अपरिचित होइनन् एघार वर्ष क्यासिनो रिसोर्ट अनुभवको साथ। उनको मूल टीमको अर्को हालको टोली सदस्य द्वारा उल्लेख पछि उनको भूमिका बारे थाहा पाए।
प्रश्न: "तपाईंको सामान्य दिन कस्तो देखिन्छ?"
काम दिन आधिकारिक रूपमा सुरु हुनुभन्दा पहिले, लौरा आफूलाई एक राम्रो मुडमा पाउनको लागि केही दिनको सumb्गीतको साथ आफ्नो दिन सुरु गर्न मनपराउँछिन्। उनी घडीमा हुँदा, उनी जान तयार छिन्।
"म शिफ्ट सुरु गरेको बेलामा गर्ने पहिलो कुरा मेनूमा हेर्नु हो। मनिस, भाँडालगायत उनीहरूलाई खानेकुराको लागि के चाहिन्छ भनेर जाँच गर्दछु र केही निश्चित मात्र तयार गर्छु। ”
लौराले साझेदारी गरिन् कि उनी पेय पदार्थ, नाश्ता, र उनीहरूको दिन सुधार गर्न एक राम्रो मुस्कान सहित खाने सेवाहरू प्रदान गरेर उनको टोली सदस्यहरूको आवश्यकताहरूमा सहभागी हुन्छन्। उनको मनपर्ने कर्तव्य उनको सहकर्मीहरुलाई मजा लिन को लागी तातो भोजन बाहिर पार छ। लौरा उनको खटाइएको कार्य स्टेशन सँधै समय र रिलि responsible क्षेत्रहरु जहाँ जिम्मेवार आपूर्ति को अभाव छ को लागी जिम्मेदार छ। उनको सेवाको लागि मनपर्ने आईटम कभर गर्मीको दिनमा आइसक्रीम हो उनको टोलीलाई शीतल बनाउन र स्फूर्ति प्राप्त गर्न मद्दत गर्न।
प्रश्न: "कुन कुराले तपाईंलाई कामको लागि राम्रो फिट बनाउँछ?"
“तपाईंसँग धेरै धैर्यता हुनुपर्दछ र मानिसहरू सुन्न सक्षम हुनुपर्दछ। कहिलेकाँही तपाईंको टोली थकित वा तनावग्रस्त हुन सक्छ र यदि तपाईंले उनीहरूको कुरा सुन्नुभयो भने यसले तिनीहरूलाई थोरै महसुस गर्न मद्दत गर्दछ।
यो यस्तो गुण हो जुन लराले महसुस गरिन् कि उनी उदाहरणीय छिन् र स्वाभाविक रूपमा उनीमा आउँछिन्। उनीले साझेदारी गरिन् कि उनी मानिसहरूलाई सहायता गर्नका निम्ति अवसरलाई मन पराउँछन्। लौराले धेरै राम्रा अनुभवहरू पाएका थिए जसमा न्यु योर्क शहर, पानामा, र उनका केही ग्र्याटन मित्रहरू सहित अन्य गन्तव्यहरू सम्मिलित यात्रा थियो।
लौरासँग पनि पर्खाइ टेबुलको अघिल्लो अनुभव छ जुन उनको पृष्ठभूमिको अर्को तत्त्व हो जसले उनलाई व्यस्त भोजन वातावरणमा कुशलतासाथ व्यवहार गर्ने र प्रदर्शन गर्ने केहि इन र बाहिरी कुराहरू बुझ्न मद्दत गर्छ।
लौराले हामीलाई यो जान्नको लागि कि नयाँ टोलीका सदस्यहरू वा हाम्रो टोलीमा सामेल हुन चाहनेहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ भनेर जान्नको लागि हामीसँग विश्वका धेरै मानिसहरू छन् जुन काम गर्न आउँदछन् वा हाम्रो सम्पत्ती भ्रमण गर्न आउँदछन् भन्ने कुरा जान्न चाहन्छन् र यो सक्षम हुनु एउटा सुन्दर चीज हो उनीहरूले साझा गर्ने चलन र अनुभवहरूबाट सिक्न। हामी तपाईंलाई यो जान्न चाहन्छौं कि लौराले उनको भूमिकामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिन् किनभने उनको अद्भुत सकारात्मक प्रकृति र उर्जाको कारण।
Skylar - पुरस्कार प्रतिनिधि
स्काइलेर हामीलाई सोकलबाट सामिल गर्दछ, सान्ता क्रुजबाट आएका। उनी संक्षिप्त रूपमा इडाहोमा बस्थिन्, तर क्यालिफोर्नियाको सूर्यबाट हराए र फर्कने निर्णय गरे (हाम्रो लागि भाग्यशाली!)
उनी करीव एक बर्षदेखि हाम्रो टोलीको एक हिस्सा रहेको छ। उनले आफ्नो परिवारको सदस्यले सुझाव दिए पछि आवेदन गर्ने निर्णय गरे। यद्यपि उनीसँग बार्टेन्डिंग अनुभव रहेको छ, तर उनले परिवर्तनको लागि केही भिन्न कुराको लागि रोजिन् र हाम्रो पुरस्कार टीमसँग अन्तर्वार्ता पश्चात, उनले निर्णय गरे कि यो सही छ।
प्रश्न: "तपाईलाई कस्तो लाग्यो कि यो तपाईको लागि सही काम हो?"
“म नयाँ केहि खोज्दै थिएँ र पुरस्कार केन्द्रले यस्तो महसुस गरे जस्तो लाग्छ कि यो एकदम सही छ। म सजिलैसँग कसैसँग कुरा गर्न सक्छु भनेर थाहा पाउँदा म आफ्नो खुट्टामा उभिरहेको छु, बस आउनेहरूलाई अभिवादन गर्दा मलाई डराउँदैन। मैले मेरो सम्पूर्ण कार्य जीवनको लागि अतिथि सेवा गरिसकेको छु। ”
स्काइलेर नियमित कर्तव्यहरूको सूचीको साथ धेरै अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्न गई। प्रत्येक दिन जब उनी भित्र छिन्, स्काईलर उनको टोलीसँगै समातिन्छ र सबै महत्त्वपूर्ण सम्पत्ती अपडेटहरू र क्यासिनो पदोन्नतिहरूमा आफुलाई ताजा पार्न र ताजा गर्न। त्यसपछि उनी सबै प्रकारका कार्यहरू मौखिक रूपमा प्राप्त गर्दछ जुन उनी जिम्मेवार हुनेछिन्। यी पुरस्कार खाता अपडेट र प्रमोशनल प्रस्ताव रिडिमन्सको साथ सहयोग प्रदान गर्न, अतिथिहरूलाई अभिवादन वा बिदाइ दिनका लागि अतिथिहरू प्रवेश गर्दा र सम्पत्तीबाट बाहिर निस्कन, उपहारहरू पठाउन र हाम्रो अतिथि सेवा स्टेशनमा अतिथि प्रश्नहरूको जवाफ दिन, र नयाँ पुरस्कार प्रोग्राम साइनअप प्राप्त गर्नदेखि लिएर हुन सक्दछन्। । चीजहरू यस्तै भूमिकामा एकदम छिटो गतिमा छन्। उनी धेरै नयाँ र फर्किने पाहुनाहरूसँग भेट्छिन्, तर स्काइलेरसँग कडा मेमोरी छ जससँग उनी अन्तर्क्रिया गर्छिन् र यसको फलस्वरूप, उनी कण्ठ गर्न र आफ्ना बारम्बार आउने पाहुनाहरूको आवश्यकताको पूर्वानुमान गर्न सक्षम छिन्।
प्रश्न: "तपाईको भूमिकालाई लिनको निम्ति कसैलाई के भन्नुहुन्छ?"
"आवेदन गरिरहेको जो कोहीलाई थाहा हुनु पर्छ कि यदि तपाई टोलीमा नयाँ हुनुहुन्छ र तपाई अडिनुभयो भने, म सहयोग गर्न जाँदैछु। हामी तपाईलाई अलमल्लमा पार्दैनौं। पुरस्कार टीम धेरै प्रेमले भरिएको छ र हामी धेरै हेरचाह गरिरहेका छौं, त्यसैले हामी पक्का गर्न चाहन्छौं कि सबैजना सफल हुन्छन्; हामी कोही पनि असफल भएको चाहँदैनौं। ”
यो यही मानसिकता हो कि स्काईलरले चाँडै उनको विभाग भित्र नयाँ भाडाहरूको लागि रोजगार कोच बन्न मदत गरेको छ। उनको सहकर्मीहरू र हाम्रो सम्पत्तीको पाहुनाहरूको आवश्यकताहरूसँग मेल खाने चाहना स्काईलरलाई एक स्वागतमूलक थप बनाउँछ र उनको चलिरहेको सफलतालाई अगाडि बढाउनेछ।
जोसलिन - VIP बार्टेन्डर
जोसलिन एक सोनोमा काउन्टी स्थानीय हुन् र छ वर्ष भन्दा अलि बढी हाम्रो टीमको एक हिस्सा रहिरहेछन्। जब तपाई रमाईलो गर्दै हुनुहुन्छ तब समय उड्दछ!
उनको निवेदनको लागि निर्णय एक सजिलो विकल्प थियो किनकि उनले साझेदारी गरिन् कि उनी सधैं बार्टेन्डिंगमा रूचि राख्छिन्। एक सकारात्मक दृष्टिकोण, मैत्री आचरण, र बारको पछाडि आफूलाई हेर्ने क्षमताले उनलाई हाम्रो टीममा सामेल हुने निर्णयमा लग्यो। जोसलिन पहिले वीआईपी बार्डेन्डर हुनु अघि ककटेल सर्भर थियो।
प्रश्न: "पेय सेवामा दिन कस्तो देखिन्छ?"
“सामान्यतया, म आफ्नो छोरालाई तयार हुनको लागि केही थप समय दिनको लागि उठ्न कोसिस गर्छु तर यदि त्यसो भएन भने म छिटो तयार हुन्छु, उसलाई खाजा बनाउँछु र दिन सुरु गर्दछु। मेरो सिफ्टको सुरूमा, म मेरो टोलीसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दछु कि केहि पनि पुनः लक गर्न आवश्यक छ कि छैन। म कुन पाहुनाहरू प्रस्तुत गरिएको छ भनेर पनि जाँच्दछौं ताकि हामी हाम्रो पाहुनाहरूको निरीक्षण गर्न सक्दैनौं।
म मेरो शिफ्टको बखत पाहुनाहरूको सेवा गर्दछु र कहिलेकाँही यसको सुपर व्यस्तता (विशेष गरी सप्ताहन्तमा) त्यसैले अर्को कुरा मलाई थाहा छ यो पट्टी तल बन्द गरेर बिहानको सिफ्टको तयारी गर्न समय आइसकेको छ। ”
जोसलिनले यो कुरा साझा गरे कि दिनको अन्त्यमा बन्द गर्दा सामान्यतया ट्याबहरू बन्द गरिनु पर्ने हुन्छ, सफाइ दिन र सबै कुरा निश्चित छ कि दुबै टोली र पाहुनाहरूलाई सम्भव भएमा कुनै पनि हिचकीबाट टाढा बाँधेर निर्बाध रूपान्तरण प्रदान गर्न। उनको कामको मनपर्ने अंश विभिन्न क्षेत्र र सांस्कृतिक पालनपोषणका व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्दैछ। जोसलिन घामको किरण हुने अवसरको धेरै सराहना गर्दछन्, पाहुनाहरू र टिम सदस्यहरूका दिनहरू उज्ज्वल बनाउँदछन्।
प्रश्न: "के त्यहाँ काम गरीरहेको छैन सम्पत्तीमा केहि मनपर्ने स्थानहरू वा गतिविधिहरू छन्?"
“जब म सुशीलाई तृष्णा गर्छु, म बोथहाउस जान चाहन्छु, तर यदि मलाई पक्का भने छैन भने म डेली ग्रिलमा जान चाहान्छु किनकि उनीहरूसँग थोरै थोरै छ। यदि म एक पेय पाउँदै छु, त्यसो भए म जी बारमा जान चाहन्छु। मेरो पिउन सामान्यतया सिडेकर हुन्छ। ”
जोसलिनले यो कुरा निश्चित गरिन् कि उनले महसुस गरे कि उनको टोलीले राम्रो सँगसँगै काम गरिरहेछ र सबै एक अर्कासँग नजिक छन्। उनको टोलीमा सम्मिलित हुन खोज्ने जो कोहीलाई, जोसलिनको सल्लाह दिनहुँ चीजहरू लिनु हो र यदि तपाइँसँग केही प्रश्नहरू छन् भने सोध्नुहोस्। "सुरुमा हराएको महसुस गर्नु सजिलो छ, तर सधैं सम्झनुहोस् कि हामी यहाँ एक अर्काको लागि छौं।"
र त्यहाँ हामीसँग छ! Graton मा जीवन मा एक दिन मा अर्को झलक। हामी एक ठूलो पठाउन चाहान्छौं हाम्रो तीनजना सहभागीहरुलाई धेरै धेरै उपयोगी अन्तरदृष्टि प्रदान गर्न समय लिनु भएकोमा। तपाईलाई तिनीहरू जुन Graton टोलीको अंश बन्न रुचि हुन सक्छ, हाम्रो जाँच गर्नुहोस् क्यारियर पृष्ठ हामीसँग उपलब्ध सबै खुला स्थानहरूको पूर्ण सूचीका लागि। फेरी भेटौला!
सब भन्दा सामान्य प्रश्न मध्ये एक जुन सबै रोजगार खोजीकर्ताहरूले नयाँ क्यारियर यात्रा सुरु गर्न तयारी गर्दा हो: […]
थप पढ्नुहोस्… बाट Graton मा जीवन मा एक दिन